यदि युद्ध भए कति खतरनाक हुनेछ उत्तर कोरिया ? | Ekhabar Nepal
यदि युद्ध भए कति खतरनाक हुनेछ उत्तर कोरिया ?
विश्व भाद्र ३० २०७४ एजेन्सी
उत्तर कोरियामाथि संयुक्त राष्ट्रको प्रतिबन्ध जारी छ । यता कोरिया भने एक पछि अर्को गरी मिसाइल परिक्षणलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । हरेक प्रतिबन्ध पछि उत्तर कोरिया थप आक्रामक भइरहेको छ । शुक्रबार सखारै उत्तर कोरियाले अर्को एक मिसाइल जापानतर्फ प्रक्षेपण गर्यो । जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबे भारत भ्रमणमा भइरहेका बेला उत्तर कोरियाले यो कदम उठाएको हो ।
कोरियाली प्रायद्वीप पहिले नै युद्ध झेलिसकेको छ । सन् १९५० मा उत्तर कोरियाका तत्कालीन नेता किम इल सुंगले दक्षिण कोरियामाथि हमला गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
अमेरिकाले यसमा मध्यस्थता गर्ने कोसिस गर्यो ता कि युद्धलाई रोक्न सकियोस् । तनाव तीन वर्षसम्म जारी रह्यो जसमा जन–धन दुबैको भारी नोक्सानी भयो ।
त्यसको ६ दशकपछि यो प्रायद्वीपमा पुनः एक भिन्न प्रकारको तनाव देखिएको छ । आफ्नो परमाणु परिक्षणमार्फत् किम जोंग उन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।
यो महिनाको सुरुवातमा उत्तर कोरियाले इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालेष्टिक मिसाइलको सफल परिक्षण गर्यो र यो मिसाइलले अलास्कासम्म हमला गर्नसक्ने दाबी गर्यो ।
त्यसलगत्तै अमेरिकी विदेशमन्त्रीले यसबारे बयान जारी गर्दै उक्त परिक्षणको कडा निन्दा गर्दै भने, ‘यो मिसाइलको परिक्षणपछि अमेरिका, हाम्रा सहयोगी, यो क्षेत्र र सबै दुनियाँका लागि थप खतरा बढेको छ ।’
केही विशेषज्ञको मान्यता अनुसार अबको तीन वर्षभित्र उत्तर कोरियाले यस्तो मिसाइल बनाउनेछ जुन लस एन्जलस शहरसम्म पुग्न सक्षम रहनेछ ।
यता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पनि तनाव जारी रहे उत्तर कोरियासँग ‘एउटा ठूलो संघर्ष’ को सम्भावना भएको बताएका छन् ।
यदि यो प्रायद्वीपमा अहिलेको तनावपूर्ण स्थिती बढे के होला, विशेषगरी तब जब विश्वका ठूला परमाणु शक्तिको रुची यो प्रायद्वीपमा छ ?
उत्तर कोरियाको पहिलो युद्धः
सन् १९५० मा कोरियाको युद्ध सुरु भयो । त्यतिबेला विश्वका महाशक्ति अमेरिका र सोभियत संघ दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वका थुप्रै देशजस्तै आफ्नो पुनर्गठनमा लागेका थिए ।
प्रायद्वीपको उत्तरी भागमा सोभियत संघले कब्जा गरेको थियो जबकी अमेरिका दक्षिणी हिस्सामा सैन्य मद्दत दिइरहेको थियो ।
जून २५ तािरखमा सोभियत संघ र चीनसँग समर्थन लिएर उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियामाथि आक्रमणको घोषणा गर्यो । अमेरिकाले ‘कम्युनिष्टहरुको हमला’ को सामना गर्नका लागि दक्षिण कोरियामा आफ्ना सेना पठायो ।
अमेरिकाको मद्दतले दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोललाई दुई महिनाभित्र स्वतन्त्र पनि गरियो तर प्रायद्वीपलाई एक गर्नका लागि अमेरिकाको आफ्नो सेनालाई उत्तर कोरियातर्फ पठाउने निर्णयलाई चीनले कडा विरोध गर्यो ।
सबै पक्ष एटम बम र परमाणु बमको कुरा गर्न थाले । चाँडै नै कोरिया प्रायद्वीपलाई एक गर्नका लागि सुरु गरिएको अभियान तेस्रो परमाणु विश्वयुद्ध हुने स्थितीमा पुग्यो ।
तीन वर्षको तनावपछि मसला शान्त भयो र त्यो पनि बिना कुनै औपचारिक शान्ति सम्झौता बिना । इलाकामा बाँकी रहेको एउटै कुरा थियो – विनाश ।
अमेरिकाको गुप्तचर एजेन्सी सिआइएमा कोरियाली मामलाकी जानकार सू टेरी भन्छिन्, ‘लाखौं कोरियाली नागरिक मारिए । करिब एक लाख बालबालिका अनाथ भए । एक करोड मानिस विस्थापित हुनुपर्यो ।’
उनी भन्छिन्, ‘प्योंगयाङ पूर्ण रुपमा ध्वस्त भइसकेको थियो । एउटा पनि भवन राम्रो स्थितीमा थिएन ।’
पुनः युद्ध भए....
सन् १९५३ जुलाई २७ मा दुबै पक्षले अस्थायी रुपमा युद्धविराम गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरे । तर भन्ने हो भने ६४ वर्ष पछि पनि दुबै देश युद्धजस्तो स्थितीमा उल्झिएका छन् ।
यो इलाकामा शत्रुता बढिरहेको छ । उत्तर कोरियाली नेता किम जोंग उन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पबिच तनाव बढिरहेको छ । यसमा केही जानकारको मान्यता अनुसार सानो गल्तीले पनि पुनः युद्ध सुरु हुनसक्छ ।
युनिभर्सिटी अफ जर्जटाउनमा सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडिजमा विश्लेषक र अमेरिकी सेनाका कर्नल डेविड म्याक्सवेल भन्छन्, ‘दुबै देशबिच अहिलेको डिमिलिटराइज्ड इलाका आज विश्वको सबैभन्दा धेरै हतियारले भरिएको इलाका बनेको छ ।’
उनी भन्छन्, ‘उत्तर कोरियाको सेनामा ११ लाख कर्मचारी छन् र यीमध्ये ७० प्रतिशत राजधानी र यो डिमिलिटराइज्ड इलाकाबिच तैनाथ छन् ।’
जानकारको मान्यता अनुसार उत्तर कोरियासँग ६० लाख सैनिकको सेना छ जसको प्रयोग आवश्यक पर्दा गर्न सकिन्छ ।’
डेविड भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ कि यो संसारको चौथो सबैभन्दा ठूलो सेना हो ।’
डेविडका अनुसार उत्तर कोरियाले केही समय अघि गरेको परमाणु परिक्षण र मिसाइल लञ्चबाट अमेरिकामाथि हमलाको सम्भावना बढेको छ ।
‘यदि किम जोंग–उन हमला गर्न चाहन्छन् भने उत्तर कोरियाका कमान्डर आगो बर्साउने आदेश दिनसक्छन् र दक्षिण कोरियामा भारी विनाश ल्याउन सक्छन् ।’
जानकार भन्छन्, ‘पहिलो केही घण्टामा सयौं हज्जारौं मिसाइल छोड्ने सम्भावना रहेको छ जो सियोललाई पूर्ण रुपमा नष्ट गर्न सक्छ ।’
केही मिनेटमा मिसाइल उत्तर कोरियाबाट सियोग पुग्नेछ । यहाँ साढे दुई करोड मानिसहरु बस्छन् र यति मानिसहरुलाई बचाएर सुरक्षित स्थानमा लैजान सम्भव पनि हुँदैन ।
डेविड भन्छन्, ‘अनुमानका अनुसार युद्धको पहिलो दिन ६४ हजारसम्मको मृत्यु हुनसक्छ । जस्तो प्रकारको हानी हुनेछ त्यसकाृ कल्पना पनि गर्न सकिन्नँ ।’
सन् १९५० जस्तै उत्तर कोरिया आफ्नो सेनालाई दक्षिणतर्फ पठाएर दक्षिण कोरियासँग सम्झौता गर्न र कोरियाली प्रायद्वीपलाई एक गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ ।
त्यतिबेला उत्तर कोरिया यस मामलामा अमेरिका दक्षिण कोरियाको मद्दतको लागि आओस् भन्ने चाहँदैनथ्यो । तर अब स्थितीमा परिवर्तन आइसकेको छ र अमेरिकाका तुरुन्त सियोलको मद्दतका लागि मध्यस्थता गर्नका लागि तयार छ ।
अमेरिकाले कसरी गर्ने हस्तक्षेपः
एन्जेलो स्टेट युनिभर्सिटीमा डिपार्टमेन्ट अफ स्टडीज सिक्योरिटी एण्ड क्रिमिनल जस्टिसमा प्रोफेसर ब्रूस बेच्टोल भन्छन्, ‘अमेरिका दक्षिण कोरियालाई उत्तर कोरियाको कब्जामा कहिले पनि पर्न दिँदैन ।’
पेन्टागनमा उत्तर पूर्व एशिया मामलाका जानकार बेच्टोल भन्छन्, ‘युद्ध भएको पहिलो हप्तामा हाम्रो पाइलटका लागि अत्यधिक काम हुनेछ । हाम्रो पहिलो कोसिस हवाई ताकतलाई पूर्ण प्रयोग गरेर उत्तर कोरियालाई अगाडि बढ्न रोक्नु र भारी हतियारको खेपलाई पुर्याउन प्रतिक्षा गर्नु हो । जबजब इलाकामा अमेरिकी सैन्य सहायता बढ्न सुरु हुनेछ हाम्रो लडाकू विमान उत्तर कोरियामा बमबारी गर्नेछन् ।’
तर जब उत्तर कोरिया अमेरिकी सेनाको दबाबमा आउनेछ स्थिती थप नाजुक हुनेछ जुन परमाणु युद्धमा परिवर्तन हुनसक्छ ।
बेच्टोल भन्छन्, ‘जब किम जोंग उन र उनका ५ हजार सहयोगीलाई उनीहरुसँग देश छोडेर जाने समय छैन भन्ने महसुस हुन्छ तब उनीहरुसँग परमाणु हतियार प्रयोग नगर्न र हज्जारौं–लाखौं अमेरिकीलाई नमार्ने कुनै कारण हुने छैन ।’
उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो स्थितीमा कुनै पनि देशले ती मिसाइलको प्रयोग गर्नेछ जुन अहिलेको स्थितीमा उत्तर कोरियाले परिक्षण गरिरहेको छ ।’
यो युद्धमा परमाणु हतियार वाइल्ड कार्डजस्तो हुनेछ । तर यदि यी हतियारको प्रयोग नभएपनि यो इलाकामा पारम्परिक युद्ध भयावह हुनेछ र जनधनको भारी नोक्सानी हुनेछ ।
ब्रुस बेच्टोल भन्छन्, ‘अन्दाजमा भन्नुपर्दा सुरुकै हप्तामा तीनदेखि चारलाख मानिसको मृत्यु हुनसक्छ अथवा २० लाख मानिसहरुको ।’
तर युद्ध यतिमै समाप्त हुनेछैन । पछिल्ला युद्धजस्तै उत्तर कोरियाली सरकारलाई सत्तामा रहनका लागि दिइने छैन र उक्त युद्ध पछि कोरियाली जोडतोडका साथ प्रायद्वीपलाई एक गर्ने कोसिस गरिनेछ ।
जर्जटाउन युनिभर्सिटीमा एशियाको राजनीति र आर्थिक मामलामा प्राध्यापक बाल्बिना ह्वांग भन्छिन्, ‘तर यो युद्धको सबैभन्दा भयानक समय हुनेछ परिवर्तनको समय ।’
‘हामीलाई थाहा छैन कि दक्षिण कोरिया एक्लैले यो परिस्थितीको सामना गर्न सक्ला ।’ बाल्बीना अमेरिकी विदेश विभागमा युद्धपछिको परिस्थितीको विश्लेषणमाथि काम गरिसकेकी छिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘हामी यहाँ ६ देखि ७ करोड मानिसहरुको कुरा गरिरहेका छौं । सियोल र अन्य शहरमा साढे दुई करोड मानिसहरु बस्दछन् । मानिसहरु हिंसाबाट भाग्ने कोसिस गर्दछन् र यस्तोमा तपाईं अन्य दुई करोड मानिसहरुलाई पनि केन्द्रमा राख्नुहोस् जो उत्तर कोरियाबाट भागेर ‘स्वतन्त्र’ हुनका लागि दक्षिण कोरियातर्फ आउन सक्छन् ।’
‘यसमा भोको र घरबार गुमाइसकेका मानिसहरु हुनेछन् र त्यस्ता व्यक्ति पनि हुनेछन् जो युद्ध गर्न चाहन्छन् तर जुनसुकै हालतमा बाँच्न चाहन्छन् ।’
सन् १९५० को युद्धपछि उत्तर र दक्षिण कोरिया पुनः आफ्नो खुट्टामा खडा भएका थिए ।
बाल्बीना दुबै देश एक हुन सक्ने तर कम समयमा यस्तो गर्न कोसिस गरे परिणाम चिन्ताजनक हुने मान्यता राख्छिन् ।
जानकारका अनुसार यदि चीन र रुस पनि यस मसलामा हाम फालेको स्थितीमा के होला भन्ने विषयमा अहिले कुनै चिन्ता गरिएको छैन ।
यसकारण निश्चित रुपमा भन्न सकिन्नँ कि युद्ध भए कस्तो स्थिती पैदा हुनेछ तर निश्चित रुपमा भन्न सकिन्छ कि यो भयानक हुनेछ ।